Weego, codsi ah in lagu beddelo gaadiidka dadweynaha - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Weego, codsi ah in lagu beddelo gaadiidka dadweynaha
Ka dib guusha laga gaarey Senegal, Weego wuxuu u guuray Morocco.
Waxaa la bilaabay dhowr toddobaad ka hor by abuuraha, Saad Jittou, codsigan ayaa looga golleeyahay inuu xalliyo dhibaatooyinka la xiriira gaadiidka dadweynaha.
"Ugu horreyntii wax yar ayaan ku jirnay. Ka dib markii codsiga Dakar uu sameeyay buuq badan, waxaa jiray dad badan oo isticmaalay, wax yar ayay ku guuleeysteen wax walba oo haween ah iyo badiba ardayda. Waxaa muuqatay in Dakar kaliya ay dhibaato ka haysato gaadiidka gaadiidka, laakiin dhammaan caasimadaha Afrika waxay la kulmeen dhibaato la mid ah. Codsigeena, waxaan riixaynaa isticmaaleyaasheena si aan gacan uga geysto si aan u dhigno xogta gaadiidka dadweynaha iyo macluumaadka, waxaanu la wadaagnaa qof walba oo sugaya bas, taraam ama taxi. "
Ma ogtahay meesha saxda ah ee baska, taraamka ama taksiyada? Hadda waxaa suurtagal ah Casablanca. Weego sidoo kale waxay suurtogal u tahay in la qiyaaso wakhtiga sugitaanka, iyo in la fududeeyo xulashada gaadiidka: xalka dhabta ah ee Moroccans.
"Gaadiidka dadwaynaha, marwalba waxaan isticmaalaa Weego, taas noloshayda way fududahay," ayuu yidhi qof isticmaala. Marka la eego dhawr jeer, waxaan ku ogaan karaa lambarka baska ee aan qaadi doono, taas oo aad iigu muhiimsan tan iyo inta aanan ka iman Casablanca. App wuxuu iga caawiyay inaan ka tago hal meel oo kale, baska, taraamka ama khadka taksiyada oo weyn. Waxa kale oo aad u xiiso leh in la ogaado waqtiga la doonayo, waxay ii ogolaaneysaa inaan qorsheynayo safarada maalin kasta.
Ka dib Casablanca, Weego waxay ku sii fideysaa magaalooyinka kale ee Morocco. Saad ayaa ka shaqeyneysa Bangiga Adduunka ee barnaamijkeeda Afrika si loogu soo bandhigo dalal badan oo ku yaalla qaaradda, laga bilaabo Côte d'Ivoire, Benin iyo Burkina Faso.